Tag Archive for "ओपेक" - एजेण्डा सेट गर्न टेकोको उपयोग ! ए टेकाहरु हो ! कति प्रदेश हुनुपर्छ रे ....??
हामी नेपाली लाटा हौं कि उल्लू हौं दोधारमा परिन्छ । सबैजना भन्छन – यत्रो पच्चिस बर्ष नाघिसक्दा समेत मेलम्ची किन बनेन ? मेलम्ची शुरु भएको बर्ष जन्मेको एउटा बच्चा २५ वर्ष उमेर नपुगी मर्नेको संख्या लाखौं होला, तिनको अर्को जन्म पनि भयो होला तर मेलम्ची आएन किन ? काठमाडौं उपत्यकामा मात्र खानेपानीको व्यापार अर्बौ रुपैयाँको छ , कम्तिमा ६/७ अर्बको छ भनिन्छ । मेलम्ची आएपछि यो व्यापारधन्दा समाप्त हुन्छ , पान... थप पढ्नुहोस्
तेलमा भएको मुल्य अस्थिरता सामान्य हुनेमा साउदी अरब आशावादी
काठमाडौं । तेलको उत्पादन र बजार सन्तुलनका बिषयमा साउदी अरब धेरै आशावादी रहेको त्यहाँका उर्जा मन्त्री खालिद अल–फालिहले मङ्गलबार बताएका छन् । तेल उत्पादक मुलुकहरूले तेलका खस्कँदो मूल्यलाई मध्य नजर राख्दै उत्पादन परिमाणमा कटौति गर्ने बताएसँगै अनिश्चित बनेको तेल बजार सन्तुलनप्रति साउदी अरब आशावादी रहेको उनले बताए । तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक) र रसिया, इरानलगायतका केही मुलुकले तेलको मूल्यमा... थप पढ्नुहोस्
भियना, अष्ट्रिया । रूससहित तेल निर्यात गर्ने मुलुकहरूको संगठन 'ओपेक' का सदस्य राष्ट्रहरूबीच हाल उत्पादन गर्दै आएको तेलको परिमाणमा प्रतिदिन १२ लाख ब्यारेलका दरले घटाउने शुक्रबार सहमति भएको छ । जसबाट उनीहरूलाई तेलको मूल्यमा आएको गिरावटबाट केही राहत मिल्नेछ । तर सहमतिका कारण तेलको मूल्यमा हुने वृद्धिले उपभोक्ताहरूमाथि थप आर्थिक भार पर्ने सम्भावना देखिएको छ । ओपेक सदस्य राष्ट्रका इन्धन मन्त्रीहरूको ... थप पढ्नुहोस्